Nsonaazụ nke nyocha ha na nyocha nke ndị ọkachamara butere isi edemede 5 na-aga ije ihe kachasị mkpa nke ụlọ ọrụ ecommerce maka ịkwọ ụgbọ ala, ikike, na ntụgharị. Agbakwunyere m ọkacha mmasị nke m nke azaghị ihe nyocha ahụ.
Ndị ọbịa anaghị adị njikere ịzụta, ha nọ ebe ahụ n'ezie nyocha. Mgbe ị nyere ozi niile ha chọrọ, ha ga - enwe ike ịzụta ihe mgbe ọ zuru oke.
Ajuju na Azịza - Ọ bụrụ na ozi ahụ adịghị, 40% nke ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị na-achọ ụzọ isi jụọ ajụjụ ma nweta azịza tupu ịzụta
Dị na ngwaahịa - Onweghị ihe na-ewute gị karịa ị nweta ụzọ ndenye ọpụpụ tupu ịchọpụta ngwaahịa anaghị adị. Debe saịtị gị na nsonaazụ ọchụchọ gị emelitere site na iji ọnọdụ snippets bara ọgaranya.
Ndị ọbịa na-achọkarị nkọwapụta anya na ngwaahịa ebe ha na-anọghị ebe ahụ inyocha ha n'onwe ha. Inwe oke nhọrọ nke onyonyo dị elu ga-eme ka ịzụrụ ihe ọzọ.
Ebiputaghi ya - Ndị ahịa anaghị atụkwasị obi ntụle zuru oke, ha na-enyocha ntụle ndị na-adịghị mma iji hụ ma echiche ndị ọzọ banyere ngwaahịa ga-emetụta mkpebi ịzụta ha.
Tags: akpaaka-zuru ezuikorindị ahịaNdị ọrụ nlekọta ndị ahịae-azụmahịakpoecommerceecommerce bara ọgaranya snippetsọsọ ọsọ ecommerceazụmahịamdg mgbasa ozingwa ahiammegheatụnyere ngwaahịangwaahịa nzachaọchụchọ ngwaahịanhazi ngwaahịaajụjụ na azịzaNtụlelaghachi iwuNyochaatụmatụsecuritynyocha semanticmbupunyocha saịtịruombugharị